Ọdịnihu nke mmekọrịta 360 Degree Video | Martech Zone
Wenezde, August 24, 2011 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Nke a bụ ezigbo teknụzụ dị ịtụnanya mgbe ị malitere iche gbasara ohere. Ikekwe ị nwere ike idekọ ọtụtụ akụkọ akụkọ ma nwee onye ọrụ pịa ma banye na-esote. Enwere ike ịme otu ihe nkiri nkiri! 🙂
Hụ ụwa dịka ọ dịbeghị mbụ na vidiyo 360 Celsius. You nwere ike iche? Ndị mmadụ na-achọ ile foto 360 Celsius nke n'okporo ámá ha bi na ya, ma ọ bụ chọpụta ebe ezumike ha na-abịa. Kedu ihe na-atọ ụtọ, ọ bụrụ na ọ bụ vidiyo 360 Celsius zuru oke kama ịbụ onyonyo ka dị? Iji vidiyo 360 Celsius ị nwere ike ịmepụta ọhụụ kachasị n'ịntanetị maka ndị ahịa gị. Kekọrịta usoro ndụ n'ezie nke gburugburu ma ọ bụ ihe omume.
Maka ozi ọzọ, gaa na otu n'ime kasị ngalaba aha Enwetala m, Yellowbird.
Tags: 360 ogo vidiyo360 vidiyo